TAARIIKH NOLOLEEDKII PATRICE LAMUMBA!!YUU AHAA LAMUMBA MUXUU SE AHAA? | Toggaherer's Weblog
Posted by: toggaherer on: April 3, 2009
Patrice Emery Lamumba
Taariikh Nololeedkii Patrice Lamumba!
Yuu ahaa Lamumba muxuu’se ahaa?
“Hadba dunida wiil baa u kaca oo diin la soo shira” waa gabaygii Sayid maxamed cabdule Xasan.
Hubaal waxa ah in dadka somaalida ah uu can ka yahay magaca Lamumba iyadoo weliba dadka qaar la baxaan magacaas. Hadaba, hadii aynu isweydiino muxuu ahaa kumuu’se ahaa lamumba.
Magaca lamumba waa magac dunida idilkeedba caan ka ah laga soo bilaabo 1958 kii ilaa haatan. Hadaba magaca lamumba wuxuu ahaa geesigii afrikada madaw u kacay wakhtiyadii gumaysiga. Wuxuu soo maray taariikh qadhaadh, nolol wel’wel iyo hurdo la’aani ku ladhantahay. Waxa hubaal ah in aan nina dhayal ku helin in uu dunida caan kaga noqdo oo uu midkastaaba marxalado kala duwan u’soo maro tartanka siyaasadeed ee caalamka.
Patrice Emery Lamumba wuxuu ahaa prime minister kii ugu horeeyey ee dalka Zaire. Wuxuu ku dhashay meel la yidhaa Onaloa oo u dhaw magaalada Kataka-Kombe, Sankuru district waqooyi bari Gobolka Kasai, waa dalka hada la yidhaa Democratic Republic of Congo oo horena loo odhanjirey (BelgianmCongo). Wuxuu ka dhashay qabiilka Batelela oo ah xubin muhiim ah oo ka tirsan qabiilka guud ee Mongo-Nkutshu ee Badhtamaha Congo. Wuxuu dhashay Patrice Emery Lamumba taariikhdu kolkii ay ahayd Jully 2 1925 kii. Waxa uu waxbarashodiisii ilaa dugsiga sare ku dhamaystay iskuuladii kiniisadaha gaalada ee protestant, ka bacdina catholic mission schools kii uu gumeystuhu sameeyey.
Kolkii uu dhamaystay dugsiga sare wuxuu shaqo ka qabtay boostada magaalo madaxda gobolka Statesville ee hada loo yaqaano Kisangani waa 1954.
Geesigii Lamumba wuxuu isla markiiba ka iftiimay oo hogaamiye ka noqday ururkii Evoluecommunity isla markaana ka agaasimay oo abaabulay midawgii shaqaalaha boostooyinka. Isla markaa waxa loo doortay shacabkii taageersanaa xisbigii la odhanjiray Belgian Liberal party. Wakhtigan ayaa waxa jirtay siyaasadii ku wajahneyd mission iskuuladii catholic-ga ahaa iyo kuwii aan ahayn uu isku dhac iyo khilaafaad ku bilaabay minister kii gumaystaha liberal-ka ee Auguste Buisseret. 1955 ayaa hadaba markii uu soo booqday King Boudouin uu la yeeshay waraysiyo badan iyadoo wada shaqayntii uu xisbiga la shaqeeyey ay runtii ka badbaadisay Lamumbe mudadii dambe ee 1956 kii in lagu soo oogo dacwad musuqsaasuq.
1957 Waxa uu shaqo ka helay ka mushaaro badan tii hore meel khamriga lagu khamiiriyo oo ka noqday sales didector oo ku taalay Stanleyville. Isla markiiba wuxuu tagay Leopoldville si uu usoo daawado bandhigii ugu horeeyey ee tartanka siyaasadeed. Waxa loo soo bandhigey qaab sidii doorashada dawladaha hoose oo si aad u qadhaadh loogu dagaalamay kuna guuleystey Joseph Kasavubu’s ABOKO.
Hadaba, Patrice Lamumba wuxuu wakhtiyadiiba bilaabay dhaqdhaqaaqa siyaasadeedisaga oo ka mid noqday asaaskii xisbiga Movement National Congalais (MNC) oo ay hogaaminayeen aqoonyahanka ku xidhiidhay catholic Circle schools…… La soco Qaybta 2 aad Qalinkii: Fu’aad Ismaciil Cumar:
Qoraa:Fu’aad Ismaciil Cumar